Sarah Hernandez waxay ku soo biirtay Machadka McKnight Foundation 2004. Kaalinta ay hada ku leedahay sarkaalka barnaamijka ee barnaamijka Vibrant & Equitable Communities Program, waxay ka shaqeysaa sidii loo hormarin lahaa hadafka barnaamijka si loo dhiso mustaqbal firfircoon oo loo siman yahay dhamaan reer Minnesota oo leh awood wadaag, barwaaqo, iyo ka qeybgal.
Kahor McKnight, Hernandez wuxuu ka shaqeeyay arrimaha guud ee shirkadaha ee Honeywell ee magaalada Minneapolis. Waxay bilawday shaqadeedii 12-ka sano ahayd ee Honeywell oo ahayd sharci-dajiya iyo falanqeeye siyaasadeed kadibna waxay noqotay maamule barnaamijkeeda siyaasada iyo arimaha bulshada. Hernandez wuxuu ka qaatay bachelor-ka farshaxanka cilmiga bulshada ee Jaamacadda Minnesota wuxuuna haystaa mastarka farshaxanka ee sayniska siyaasadda ee Jaamacadda California ee Santa Barbara.
Hernandez wuxuu ka soo shaqeeyay guddiyo dhowr ah oo la talin ah, oo ay ku jiraan Kooxda Maalgelinta Xaafadaha, Hay'adda Taageerada Hindisaha Local Twin Cities, iyo Nexus Community Partners. Waxay hadda u adeegtaa iyada oo wada-guddoomiye ka ah kooxda Minneapolis Northside Funders Group, Saint Paul Eastside Funders Group, iyo Guddi-hoosaadka samafalka ee 'We Are Still Here MN'. Waxay sidoo kale ka shaqeysaa guddiga hagidda Minnesota Compass ee Wilder Foundation.
By Sarah Hernandez, Sawirro by Molly Miles Juun 2018